အချိန်အားပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဦး ဆုံးလုပ်ခဲ့သူဘင်ဂျမင်ဖရန့်ကလင်သည်နက်ရှိုင်းသောအလုပ်များ၊ ရေတိမ်ပိုင်းနှင့်အနားယူချိန်များကိုဖြန့်ဝေရန်ဤနည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူကမှတ်ချက်ချသည်မှာ - ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းတိုင်းတွင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ရှိသင့်သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဘဏ္spendingာရေးဘတ်ဂျက်ပုံစံတစ်မျိုးကိုကျင့်သုံးပြီးလက်ရှိအသုံးစရိတ်နှင့်အနာဂတ်အသုံးစရိတ်များအတွက်စီစဉ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိအလုပ်များကိုခြေရာခံ။ အနာဂတ်လုပ်ငန်းများကိုအချိန်ဇယားဆွဲနေစဉ်အချိန်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ဘတ်ဂျက်ငွေနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။အရက်။
အချိန်ကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အား "နောက်ထပ်ဘာလုပ်သင့်သလဲ" ဟုမိမိကိုယ်ကိုမမေးသောကြောင့်အချိန်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခိုင်အမာရပ်တည်ရန် နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွင်ရှုံးနိမ့်ပါ။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုအားနည်းချက် သည်ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သည်ကိုကြောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အချိန်တွင်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းလျော့နည်းသွားသည်။ အချိန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်, ငါအစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ, ဒါကြောင့်ငါအကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သင့်ပါတယ်။ အချိန်ပိတ်ဆို့ခြင်း၏နောက်ထပ်အဓိကအကျိုးကျေးဇူးမှာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ chronotypes ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ သတိရှိရှိအရှိဆုံးသောအခါနက်ရှိုင်းပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိသောအလုပ်ကိုစီစဉ်ရန်ဖြစ်သည်။
ငါ ၁၀ နာရီမှညနေ ၂ နာရီအကြားလှုပ်ရှားမှုအရှိဆုံးဖြစ်တယ်။ ငါသည်ဤကြားကာလအတွင်းအများဆုံးစွမ်းအင်လိုအပ်ကြောင်းအလုပ်အချိန်ဇယားဆွဲပါလိမ့်မယ်။ နံနက်ခင်းမှာအိပ်ချင်နေရင်ငါ့ကိုစီးဆင်းစေမယ့်သေးငယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါသိလျှင်ငါနောက်ထပ်လှိုင်းခံစားရသည်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစွမ်းအင်, ဤအချိန်ကာလအတွင်းနောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလုပ်များကိုအစုတခုစီစဉ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းအမှား ။ planning error
implementation ရည်ရွယ်ချက် ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းများကိုဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။
ဟာအလုပ်တွေကိုသူတို့ရဲ့အရေးပါမှုနဲ့ ဦး စားပေးအရအမျိုးအစားခွဲခြားရန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဲဒါကိုစီစဉ်ပါ။ importa တာဝန်များntes နှင့် Non- အရေးပေါ်။ ဒီအလုပ်တွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မရှိသေးပေမယ့်သူတို့ကအပ်ကိုရေရှည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေပိုနီးစေတယ်။
Delegate / pospone - အရေးမကြီးသောအရေးတကြီးလုပ်ဆောင်မှုများ။
ဒီအလုပ်တွေက မဟုတ်သေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့ကိုအားဖြင့်ဖျော်ဖြေ။ ဤအမျိုးအစားသည်အန္တရာယ်များသောကြောင့်ဤအလုပ်များသောအလုပ်ကိုအချိန်ဖြုန်းရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ဤတာဝန်များကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး မှပိုင်ဆိုင်သည်။
လုပ်ငန်းများကို ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်သည်၊ ငါတို့မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကိုဖျက်ပစ်ပါ။ အရေးမကြီးသောအရေးပေါ်မဟုတ်တဲ့အလုပ်များကို။ ဒီအလုပ်များကို NO ဟုပြောခြင်းကပိုကောင်းပါတယ်။
သာဓက။ ။ ကျွန်ုပ်၏ blog post ကိုနံနက် ၃ နာရီမှညနေ ၄ နာရီထိငါရေးမည်။
ဒီနည်းဗျူဟာကပိုပြီးထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောခန့်မှန်းချက်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောသဘောထားများကိုလျှော့ချခြင်းတို့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဘလော့ဂ်တင်ထားတာဟာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ post ထက်ပိုကောင်းတယ်။
သာဓက - ၃ နာရီမှညနေ ၄ နာရီထိကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုကျွန်ုပ်အဆုံးသတ်ပါမည်။
သည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့အငယ်နှင့်အငယ်စားအလုပ်များကိုအုပ်စုဖွဲ့သည်။ task bundle ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအနေဆိုင်းများကိုလျှော့ချပြီးပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ - ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်များကိုစစ်ဆေးပြီးဘလော့ဂ်မှတ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုရှာနေစဉ်၊ ipodcasts တွေ၊ အင်တာဗျူးတွေ၊ ကွန်ဖရင့်တွေမှာကျွန်တော်အမီလိုက်နိုင်ပါပြီ။ အစားအစာပြင်ဆင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုကိုဖုန်းခေါ်နိုင်သည်။
Today's theme နေ့တိုင်းကိုတစ်ချိန်လုံးသတ်မှတ်ထားသည်။ ဤအမျိုးအစားသည်တာ ၀ န်အမျိုးမျိုးရှိသောလူများအတွက်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂျက်ဒေါ်ဆီသည်
ဒီနည်းပညာကို Twitter နှင့် Square ၏ CEO အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
: မှန်ကန်သောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသို့တိုးတက်ရန်အရေးကြီးသည်။ အရေးကြီးသောစီမံကိန်းများကြောင့်အာရုံမပျံ့လွင့်စေဖို့အရေးကြီးသည်။
နှစ်စဉ်စီမံကိန်းကိုလေးပုံသုံးပုံခွဲခြားသည်။ သုံးလတစ်ကြိမ်အပြီး၊ ပြီးစီးသည့်လုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲနှစ်ပတ်လည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ဦး တည်သောတိုးတက်မှုနှင့်နှစ်ပတ်လည်စီမံကိန်း၏ကျန်ရှိသောအလုပ်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်တိကျသောပန်းတိုင်များကိုသတ်မှတ်ပါ။
Barbara Oakley သည်သူမ၏
href=> Barbara Oakley
href=> စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ။ သူမပြောသည့်အတိုင်း -
အချိန်ကိုဘယ်လိုပိတ်ဆို့ရမလဲ။ မည်သည့်နည်းစနစ်နှင့်မဆိုကဲ့သို့ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောရှုပ်ထွေးခြင်း (သို့) ရိုးရှင်းပါသည်။ ငါ ဒီဆောင်းပါး
ဒီ Cal Newport ပြသသော Cal Newport ပြသနည်းကိုအသုံးပြုနေတယ်။
ကောင်ဆွနဲ့စတင်ပါအပတ်စဉ်သို့မဟုတ်သုံးလတစ်ကြိမ်အလုပ်စာရင်းများ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်မှတ်စုများကိုဖော်ပြပါ။ ထိုအခါစက္ကူမှတ်စုစာအုပ်သို့မဟုတ်ပြက္ခဒိန်များကဲ့သို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်အက်ပ်များကို သုံး၍ လုပ်ငန်းတစ်ခုစီကိုအချိန်ကာလသတ်မှတ်ပေးသည်။
အရေးကြီးဆုံးအရာများကို ဦး စွာစီစဉ်ပါ။ ပိုကြီးပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အသေးအဖွဲအလုပ်များကို။
ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းများကိုကြာရှည်သောစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ အသေးစားလုပ်ငန်းများကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်သည်။ ခရီးသွားခြင်း၊ နေ့လည်စာစားခြင်း၊ အစာစားခြင်း၊ ကျောင်းမှကလေးများကိုကျောင်းခေါ်ခြင်းစသည့်အရာများကိုလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပါ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက်အချိန်ကိုခန့်မှန်းပါ။
ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအခြေအနေများအတွက်အကောင့်အတွက်အချိန်ကြားခံသို့မဟုတ်အချိန်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အချိန်ပိုထည့်ပါ။
အချို့သောလုပ်ကွက်များသည်အလွန်တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ရှည်လျားလွန်းသောကြောင့်၎င်းတို့ပေးအပ်သောတာဝန်များအတွက်ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်ကိုပြုပြင်ပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။ အစီအစဉ်သည်စာချုပ်မဟုတ်ဘဲစီမံချက်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်သောကြောင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အရေးကြီးသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတူညီသောအစီအစဉ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်းဆိုချက်အသစ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စီစဉ်ပြီးအစီအစဉ်ကိုအသစ်ပြောင်းရမည်။ လုပ်ငန်းသစ်များဆက်ဆက်လာလိမ့်မည်။ Eisenhower Matrix ကိုအသုံးချပြီးအလုပ်သစ်မည်သည့်နေရာနှင့်လိုက်ဖက်သည်ကိုကြည့်ပါ (ယနေ့၊ အောက်ပါနေ့များကိုလွှဲပြောင်းနိုင်သည်) ။
ယခုငါ Cal Newport ၏
Time-Block ကိုအသုံးပြုနေသည်။ စီစဉ်သူ ။ ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက Moleskine နဲ့ Leuchtturm မှတ်စုစာအုပ်တွေသုံးခဲ့သလိုရိုးရှင်းတဲ့ A4 စာမျက်နှာများလည်းပါ ၀ င်ခဲ့တယ်။
ပြက္ခဒိန်သည်အစည်းအဝေးများသို့မဟုတ်ချိန်းဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Todoist နှင့်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ရန်စာရင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းများကိုစီမံသည်။ ထိုအခါငါဤအဖြစ်အပျက်များကိုကျွန်ုပ်၏စက္ကူဒိုင်ယာရီတွင်ကူးယူလိုက်သည်။
ငါ ၃၀-၄၀ မိနစ်လောက်ပိတ်ထားတယ်၊ ငါ့မှာရှိတဲ့ခြေထောက်တွေကိုဆန့်ထုတ်ဖို့၊ ရေချိုးခန်းကိုသွားဖို့၊ ရေသောက်ဖို့စတာတွေကို ၅ မိနစ် tampon ရှိတယ်။
အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသုံးချပရိုဂရမ်များပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲအတွေးများသို့မဟုတ်အတွေးများကိုစက္ကူပေါ်တွင်ရေးမှတ်ထားခြင်းဖြင့်အခြေအနေကိုသိပ်မပြောင်းပါ။ အချိန်ကာလကုန်ဆုံးသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကြားခံပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ထိုအကြံဥာဏ်များကို Google Calendar သို့မဟုတ် Todoist သို့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့တာအတွင်းထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောအလုပ်များကိုရေးသားထားသောထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်စာရွက်သေးသေးလေးတစ်ခုရှိသည်။ ။ ဒီစာရွက်ကိုလက်ရှိနေ့အတွက် Bookmark အဖြစ်အသုံးပြုနေပါတယ် နက်ဖြန်နေ့၌ငါသည်ထိုနေ့အဘို့ဤစာတမ်း bookmark ။ ကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့ပ်ကိုမပိတ်ခင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အီးမေးလ်များကိုစစ်ဆေး၊ ကျန်ရှိသောအယူအဆများကိုစက္ကူမှဒစ်ဂျစ်တယ်အလုပ်များသို့ရွှေ့ပြောင်း၊ လာမည့်နေ့ရက်များကိုပြန်လည်မြင်ယောင်။ ကျွန်ုပ်ဘာမှမမေ့သွားသည်ကိုသေချာသည်။ တစ်နေ့တာ၏အဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏စက္ကူဒိုင်ယာရီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုမှန်ကန်စွာခန့်မှန်းနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်စာရင်းအားလုံးကိုကျွန်ုပ်စာရင်းထဲထည့်ပြီးပြီလား။ ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? ငါ့အကြီးမားဆုံးစိတ်ပျက်စရာကဘာလဲ။ ကျွန်ုပ်ဘာကိုပြောင်းလဲနိုင်သနည်း။ ကျွန်ုပ်၏နေ့ရက်များကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်es၊ ကျွန်ုပ်သည်အကျိုးအရှိဆုံးသို့မဟုတ်အာရုံပျံ့လွင့်မှုအများဆုံးရှိသည့်ပုံစံတစ်ခုကိုလာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပြန်လည်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ထိုအခါနောက်သုံးသပ်ချက်ကို အခြေခံ၍ နောက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်စီစဉ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မပြီးဆုံးသေးသောအလုပ်များရှိပါကယခုသူတို့ကိုပြန်လည်လည်ပတ်။ နောက်နေ့များသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏စာအုပ် Deep Work တွင် Cal Newport ကဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို "အလုပ်" အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ရိုးရာဓလေ့” ။ ဤနည်းသည်မပြီးဆုံးသေးသောအလုပ်နှင့်ဆက်နွယ်သောစိတ်၊ စိုးရိမ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုအလွန်ထိရောက်သည် ( the Zeigarnik effect တွင်ကြည့်ပါ။ ) စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်များစွာပိတ်ဆို့ခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ အချိန်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ထိုက်တန်သလား။ နေ့တိုင်းအလုပ်စီစဉ်ခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်းတို့သည်အလုပ်ရှုပ်နေပုံရသည်။ သို့ရာတွင်၊ Cal Newport သည် သူ၏ဆောင်းပါး -“ ၎င်းသည်ကြီးမားသောကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုထုတ်ပေးသည်။ငါ့ကို ။ ပိတ်ဆို့ထားသောနာရီ ၄၀ အလုပ်လုပ်ရက်သည်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ ၆၀+ နာရီအပတ်ရှိပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘဲထွက်ရှိမှုပမာဏအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဒီနံပါတ်များကို (နာရီ ၄၀ နှင့် ၆၀ နာရီ) ကိုကျွန်ုပ်မအတည်ပြုနိုင်ပါ။ သို့သော်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ရှင်းလင်းသောပန်းတိုင်များကိုသာစဉ်းစားပါကအချိန်များစွာပွားများလာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ဇယားကိုမထိန်းချုပ်လျှင် ( predictive mode ) ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ဇယားသည်ကျွန်ုပ်တို့အားထိန်းချုပ်လိမ့်မည်။ ( reactive mode ။ အရာရာတိုင်းသည်အရေးတကြီးထင်ရသည့်နေရာ) ။ ထိုအခါမှသာ ဖြစ်ပါသည်။ “ သင်ကိုယ်တိုင်မပြင်ဆင်လျှင်၊ ပျက်ကွက်မှုအတွက်သင်ပြင်ဆင်နေသည်။ ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များကိုသင်ယူရန်၊ မှန်ကန်သောနည်းဗျူဟာများနှင့်စနစ်များကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအောင်မြင်စေနိုင်သည်။ ထိရောက်သောအလုပ်သည်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်များခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကိုစမတ်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤကမ္ဘာ၌အချိန်အနည်းငယ်သာရှိသည်နှင့်အချိန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်အန္တိမ Non-regenerable အရင်းအမြစ်။ အဲဒါကိုပညာရှိရှိသုံးစွဲကြပါစို့။
https://www.roxanamurariu.com/time-blocking/ ။ ဆက်စပ်သောပုံပြင်များမှာတင်ခဲ့သည်။ ခေါင်းစဉ် ခေါင်းစဉ် မိတ်ဖက်ပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကို @AWH #promoted Montessori pedagogy ကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားရပြီး
E3 2021 သည်
@ wheeljack84 မှ
ရဲ့ virtual Convention ထဲမှာ
မှနာမည်ကြီး Gu ည့်သည်များနှင့် panel များကိုအတည်ပြုသည်။ >
Coronavirus - အကြံပေးအဖွဲ့၏လော်ဘီအဖွဲ့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ငွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်
2021-06-24 16:07:22 | အသစ်
အမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ကပေါင် ၁၀၀၀၀ ရပြီးသူမအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းစတောမန်းမှအသိပေးခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်...
2021-06-24 16:05:31 | အသစ်
2021-06-24 16:03:17 | အသစ်
ဗြိတိန်နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်နေထိုင်သော၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူသို့မဟုတ်ခရီးသွားလာသူများသည် Covid စာမေးပွဲကိုတက်ရောက်ရန်အားပေးခံရသည်။...
2021-06-24 16:01:24 | အသစ်
2021-06-24 15:59:52 | အသစ်
ယခုအသက် ၄၀ ကျော်သောသူများသည်အဓိကကာကွယ်ဆေးထိုးဌာနတစ်ခုနှင့်လူထုဆေးဆိုင်များတွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်သည်။...
Covid: Bristol ကျောင်းသားနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည်အိန္ဒိယသို့အောက်စီဂျင်ပေးပို့သည်
2021-06-24 15:58:05 | အသစ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ Covid နှင့်အတူသူမ၏သူငယ်ချင်းနှင့်မမွေးသေးသောကလေးငယ်သေဆုံးပြီးနောက် Suchet Chaturvedi သည်ရန်ပုံငွေရှာဖွေသည်။...
Covid: စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာသောကြော်ငြာများအတွက်ယူရိုပန်ကာအခမ်းအနားများသည် ထိတ်လန့်စရာ ဖြစ်သည်
2021-06-24 15:56:23 | အသစ်
Adriana Rivas: Pinochet ခေတ်သံသယရှိသူကထုတ်ယူမှုအယူခံရှုံးသည်
2021-06-24 15:54:32 | အသစ်
သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်သော Adriana Rivas သည်ချီလီတွင် Pinochet အုပ်ချုပ်ချိန်အတွင်းပြန်ပေးဆွဲမှုဟုသံသယရှိသည်။...
အဝလွန်ခြင်းဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု - နံနက် ၉ နာရီမတိုင်မီ junk food ပေါ်တီဗွီကြော်ငြာများကိုပိတ်ပင်လိမ့်မည်
2021-06-24 15:51:24 | အသစ်
၀ န်ကြီးများမှ ၀ န်ကြီးများကအဝလွန်မှုကြီးထွားနေစဉ်အတွင်းကလေးများသည်အဆီ၊ ဆားနှင့်သကြားဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာများကိုဖြတ်တောက်သင့်သည်။...
Sarah Buick: ပျောက်ဆုံးနေသော Ben Nevis Walker ကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေသည်
2021-06-24 15:49:45 | အသစ်
Dundee မှ Sarah Buick ဆိုသူကတောင်ထိပ်မှာပုံကိုလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာတင်ခဲ့သည်။...
Anton du beke သည်စီးရီးသစ်၏တရားသူကြီးများနှင့်တင်းကြပ်စွာပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်
2021-06-24 15:48:13 | အသစ်
Bruno Tonioli သည် Covid ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်အမေရိကန်ကိုမပျံသန်းနိုင်သောကြောင့်တရားသူကြီးမဖြစ်နိုင်ပါ။...
Bournemouth, christchurch နှင့် poole အတွက်အရက်သိမ်းဆည်းရန်အင်အားကြီးအသစ်
2021-06-24 15:46:39 | အသစ်
2021-06-24 15:45:09 | အသစ်
ကုမ္ပဏီ ၁၅ ခုသည်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအတွက်ဒဏ်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇. ၆၆ သန်းဒဏ်ရိုက်ခံရသည်ဟုကောင်စီအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။...
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု - စကော့တလန်ရှိအကြီးစား CO2 ဖယ်ရှားရေးစက်ရုံ
2021-06-24 15:43:28 | အသစ်
စကော့တလန်တွင်နှစ်စဉ်သစ်ပင်သန်း ၄၀ နှင့်ညီမျှသောသစ်ပင်များကိုဖယ်ရှားနိုင်သောစက်ရုံတစ်ရုံကိုစီစဉ်ထားသည်။...
2021-06-24 15:41:37 | အသစ်
Josh သည်လီဗာပူးလ်မှ LGBT အမျိုးသားများအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။...